Somaliland.Org » Jawaab Madaxtooyadu ka bixisay khudbad Faysal Cali Waraabe jeediyey: Waxay shaki gelisey Caafimaadkiisa Maskaxeed Somaliland.Org
Jawaab Madaxtooyadu ka bixisay khudbad Faysal Cali Waraabe jeediyey: Waxay shaki gelisey Caafimaadkiisa Maskaxeed
June 30th, 2008 Comments Off Hargeysa (Somaliland.org) – Madaxtooyada Somaliland ayaa jawaab kulul ka bixisay hadalo ka soo yeedhay Guddoomiyaha Xisbiga UCID, Faysal Cali Waraabe. Waxayna calaamad-su’aal gelisey Madaxtooyadu caafimaad-qabka maxkaxeed ee Guddoomiyaha, iyada oo si ba’an u weerartay shakhsiyaddiisa siyaasadeed.
Afhayeenka Madaxtooyada, Mr. Siciid Caddaani Mooge ayaa warsaxaafadeed uu shalay soo saaray waxa uu kaga jawaabey hadal uu ka jeediyey Faysal Cali Waraabe xaflad xisbigiisu ku xusayey maalintii Somaliland madax bannaanideeda ka qaadatay Boqortooyadii Ingiriiska, 26 June, oo uu dhalliilo ugu jeediyey maamulka Daahir Riyaale, socdaalkii uu dhowaan ku tegey Jabuuti, Madaxweynaha Jabuuti iyo dhinacyo kale. Waxana uu Warsaxaafadeedku qodob-qodob uga jawaabey arrimihii Faysal ku dhalliilay Daahir Riyaale iyo xidhiidhka labada dal ee Jabuuti iyo Somaliland.
Isaga oo ugu horrayn ka jawaabaya dhalliilaha uu Faysal Cali Waraabe u jeediyey Daahir Riyaale iyo Madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle, waxa uu yidhi, “Marka hore hadalaas deelqaafka iyo cayda qaawan ah ee loo gaystay labada madaxweyne ee Somaliland iyo Djibouti oo uu u badheedhay nin sheeganaya in uu yahay Gudoomiye Xisbi Qaran, waa wax laga yaayakhsoodo. Marka uu Faysal ku dhaaranayo in Madaxweynaha Djibouti Ismaciil Cumar Geelle aanu iman karin kana soo degi karin dhabaha Dayuuradaha Somaliland, hadii ay dhacdaba yaa isaga wax ka waydiinaya, afkase uu ku hadlayaa iyo Xilka loo igmaday ee arrintaasi ka khusaysaa maxay tahay?”.
Warsaxaafadeedka Madaxtooyadu waxa uu ku tilmaamay Faysal Cali Waraabe nin aan lahayn meel loogu soo hagaago oo isagu is buriya, waxana uu tusaale u soo qaatay socdaalkii Daahir Riyaale ku tegey Jabuuti sannadkii 2002 oo uu Faysal si kulul u cambaareeyey, balse, uu ammaan ka dambeysiiyey.
“Waxa kale oo xusid mudan in markii Madaxweynuhu uu safarka ku tegay Jabuuti sanadkii 2002 aflagaado tan la mid ah uu u gaystay socdaalkii Madaxweynaha, isaga oo si weyn u dhaleeceeyay booqashadaa Madaxweynaha iyo Dawlada Jabuutiba, taasina waxay ka dhigan tahay maahmaahda Soomaaliyeed ee ah “Dhuusa Geel, mana baaqato, mana urto’’,” ayuu yidhi Warsaxaafadeedka Madaxtooyadu.
Waxana uu raaciyey warsaxaafadeedku isaga oo toos ula hadlaya Faysal, “Sanadkii 2005, waxa tagtay Faysaloow Jabuuti, adiga oo Madaxweynihii aad aflagaadada kula kacday uu ku soo dhaweeyay, kuna karaameeyay, ka dibna aad ka am